Nosakanan'ny Russia ny sidina Armenia rehetra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nosakanan'ny Russia ny sidina Armenia rehetra
Nanambara ny governemanta Rosiana fa ny fifamoivoizana an'habakabaka rehetra eo anelanelan'ny Russia sy Armenia haato mandritra ny roa herinandro.
Ny praiminisitra rosiana Mikhail Mishustin sy ny praiminisitra Armeniana Nikol Pashinyan no nanapa-kevitra. Mandritra izany fotoana izany dia hitohy ny fifamoivoizana entana, ary ny olom-pirenenan'ireo firenena dia afaka miverina amin'ny tanindrazany.
Nisy fanjakana vonjy taitra koa nambara tany Armenia. Nanjary manan-kery tamin'ny 16 martsa ary manan-kery mandritra ny iray volana.
"Manomboka amin'ny 16 martsa, manomboka amin'ny 5:00 hariva ka hatramin'ny 16 aprily 09:00 dia voalaza fa misy fepetra vonjy maika manerana ny repoblika," hoy ny minisitry ny fitsarana ny Repoblika Rustam Badasyan.
Hatreto dia tranga 30 an'ny Coronavirus dia voasoratra ara-panjakana tany Armenia, ary 93 any Russia.
Mampitombo ny sidina any UK ny sidina aorian'ny fianjeran'i Flybe
Nofaranana tao Serbia i Uzakrota niaraka tamin'ireo mpandray anjara 300 niady hevitra momba ny fizahantany sy ny fahasalamana